Amagama amaningi abadabuka kwamanye amazwe baye baba ingxenye yokuphila kwethu kwansuku zonke. Sivame ugabise ilungelo labo washiya, ngaso sonke isikhathi ecabanga ngomqondo esiqinile yokusetshenziswa yabo, kanye nenani. Ngakho-ke, kuyinto efiselekayo ukwazi umsuka indaba, kanye nesimongcondvo saleso naleso lawa magama, hhayi abanjwe, ikakhulukazi umphakathi noma inkulumo emphakathini. Ngokwesibonelo, igama elithi "umxhwele". Kusho ukuthini? Ake sizame ukuqonda.
Okwakushiwo yegama elithi
Uma sikhuluma engasho lutho bezwi, amaphepha achazayo, equkethe okushiwo esetshenziswa kakhulu e Russian wezinkulumo zolimi, ngaphezu kwakho konke usitshele ukuthi sikhuluma okuvelayo omuhle, oveza kwizifundo noma izimo. Okuchaza "ukujabulisa"? Njengazo, ukuheha, ugqozi nenhlonipho noma indawo, kubangele imizwa emnandi futhi izinhlangano, kanye nomuntu ozozwelana nami. Ngakho-ke, i-antonym leli zwi, ungathola amazwi anjengokuthi "nokucasula okujabulisayo" noma "dudula".
"Uhambe Imayela Elilodwa" ... Yini lelo zwi lapho livela khona isiRashiya? Kukhona amaphuzu amaningi umbono ngalesi sihloko. Ngokwesibonelo, abanye ososayensi bakholelwa ukuthi sikakhokho kwegama elithi ingatholakala imixhantela Indo-European ezicashe «pos-e-engakafi». Ngokuqondene nezilimi zasendulo, leli gama likhona isiLatini, kodwa kuzwakala imponere. It kungenziwa elihunyushwe ngokuthi "ukubeka" futhi "abeke" futhi "ugqozi". Futhi ngakho-ke bawa kithi by ulimi isiJalimane, lapho inani layo wayesondelene kakhulu esikwaziyo namuhla. Kube kubukeka sengathi imponieren. Mhlawumbe abanye ithonya phezu wesimanje wale Ngelimi Russian kwadingeka sabafowabo French. Kukhona "umxhwele" anencazelo ekhethekile: mangaza, ukucindezela ngobukhulu bawo, ngisho zintengantenga zokuziphatha.
Sula umongo yokusetshenziswa
Naphezu kweqiniso lokuthi leli gama has bomcondvofana eziningi, kufanele usetshenziselwe inhloso yazo kanye kuphela ethize, elilungele leli cala. Lapho ncamashi sithi igama elithi "umxhwele"? Kuyini lokhu isimo? Okokuqala, kudingeka sibheke umongo nomthwalo lwetakhi telulwimi-syntactical. Ngokwesibonelo, naphezu ukufana amagugu, akunakwenzeka ukushintsha igama elithi "umxhwele" nge "like". Okokuqala, ngoba uma uku othile ofana nawe, khona-ke izimfanelo Esimweni esinjalo esifanelana izwi lokugcina. Okungukuthi, "wangitshela uthanda." Uma umuntu othile, khona-ke kufanele kube ukuthi kunjalo, "ucela kimi." Singasho ukuthi into esemqoka kuleli cala - ngubani ukuthi ngubani ukuzizwa imizwa omuhle. Ngakho, kukhona kombhala - ". Uzwela noHezekeli" "umxhwele" ukubaluleka uhlobo Lokhu akushintshi ukuthi okushiwo lonke, kodwa nangezindlela ezihlukahlukene lesifanele.
Njengoba igama elithi has umsuka Latin-French-isiJalimane, it is capacious ezingaphezu kuka omqondofana yayo Russian. "Uhambe Imayela Elilodwa" - lokho Lingasho ukuthini ngaphezulu? Uma siqhathanisa ke, njengoba kushiwo ngaphezulu, ngegama elithi "njenge-", it has a ezahlukene ebanzi of amagugu. Singasho ukuthi "umthamo" lichaza umuzwa kusukela elithi "umxhwele" manje. Lena akuyona kuphela ukuheha kanye isikhalazo, kodwa futhi bafanelwe inhlonipho, ithemba, igunya futhi ugqozi nenhlonipho. Lokho izwi akuhileli nje kuphela izici zangaphandle kodwa futhi yangaphakathi omuhle mayelana nale ndaba, lapho akhiwe. Ngakho-ke, kungashiwo mayelana enhlekeleleni ethile. Ngokwesibonelo: ". Imfundiso ngihlatshwa umxhwele yimithetho ukujula yayo, okunengqondo futhi ikholisa" Noma, amazwi anjalo zivumelekile lezombusazwe noma ngisho ihlelo zenkolo. Ngesizathu esifanayo, ukuze sikwazi ukukhuluma hhayi kuphela ngomuntu, kodwa futhi yezimfanelo zayo ngazinye - ingqondo, ngezici zobuntu, nokunye.
Umehluko ukudla ezindaweni
Abathandi izincwadi Russian Namanje bebaphikisana ngani lapho izwi ezifanelekayo "umxhwele". Abanye bakholelwa ukuthi iningi ngokwemvelo zisebenzisa inkulumo yakhe esemthethweni at ibhizinisi-isitayela zokuxhumana, journalism, journalism, inkulumo yesayensi nokunye. Mol, colloquially eside enjalo ubukeka kancane yokubukisa ngisho jarring. Ngakolunye uhlangothi, pedants enjalo uphikisana - uma abantu bahlakaniphile ke ingxoxo yabo siqukethe ungagcini nje ngokucabanga ngamagama eyayivame nezinkulumo. Ngakho-ke, ingxoxo ezihlakaniphile xaxa, ikakhulukazi kusukela ethemini "umxhwele" ngeke ukugqama umongo jikelele. Phela, ngolimi zanamuhla value wamukele kokuba imvelaphi isiJalimane, kuyilapho nezincwadi zakudala Russian yekhulu nesishiyagalolunye kwaba ingqondo ababevela lapho bekhuluma isiFulentshi. Ezweni zethu ezineziyaluyalu isivele yisikhathi futhi pheze ungalokothi esetshenziswa. Ngakho-ke, abalobi ezifana uLeo Tolstoy, zingakwazi ukusebenzisa lezo izwi ngomqondo "ukucindezela izimiso 'zokuhle, okungafani ngayo ukubaluleka sento ezifana' like '. Manje kubonakala akucaci kahle ngokuphelele.